रबि लामिछानेका हजारौ समर्थनले घेरे प्रहरी चौकी ! “हाम्रो रबिप्राण भन्दा प्यारो छ ” भन्दै नाराबाजी (भिडियो हेर्नुस) « Etajakhabar
रबि लामिछानेका हजारौ समर्थनले घेरे प्रहरी चौकी ! “हाम्रो रबिप्राण भन्दा प्यारो छ ” भन्दै नाराबाजी (भिडियो हेर्नुस)
प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार १३:२५
हरीले पक्राउ गरेका न्युज २४ टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेका समर्थकले रिहाइको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि प्रर्दशन गरेको छन् । उनिहरुले नाराबाजी सहित प्रर्दशन गरेका हुन् । बाक्लो संङख्यामा लामिछानेका समर्थहरु उपस्थित भएका छन् ।
लामिछानेसंगै युवराज कँडेल र नर्स अस्मिता कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी चितवन ल्याएको छ । कडा सुरक्षाका विच उनिहरुलाई मध्यरात १ बजे चितवन ल्याइएको हो । उनिहरुको भरतपुर अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गरिएको छ । प्रहरी हिरासतमा उनिहरुलाई कार्यालयमा उपलब्ध स्रोत साधन दिएर राखेको चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी दान बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभएको छ । आजै जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी ल्याएपछि अनुसन्धान सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो ।